पोखरा । प्रविधिमैत्री शिक्षक समाज, कास्कीको अध्यक्षमा सकुन्तला सोती सर्वसम्मत चयन भएकी छिन् । शनिबार पोखरामा गण्डकी प्रदेश समितिद्वारा आयोजित भेलाबाट श्रीकृष्ण मा. वि., पोखराकी सोती चयन भएकी हुन् ।
समितिको उपाध्यक्षमा विश्व शान्ति मा. वि., रुपाका विक्रमराज चापागाईं चयन भएका छन् । यस्तै सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिवमा क्रमशः भीम सुवेदी, सरस्वती गौतम र झक प्रधान चयन भए । समितिका सदस्यहरुमा रुपिन्द्र प्रभावी, धर्मेश जयसवाल, कमला लम्साल, गोकुलप्रसाद पौडेल, सम्झना पोखरेल, कृष्ण आचार्य, रमेश परियार र दुर्गा ऐर भण्डारी चयन भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पोखरा महानगरपालिकाका सचेतक तथा वडा नं. १९ का वडा अध्यक्ष शोभामोहन पौडेलले राज्यका हरेक क्रान्ति र आन्दोलनमा सक्रिय हुने तर उचित मूल्याङ्कन हुन नसकेको वर्गका रूपमा शिक्षक रहेको धारणा राखे । शिक्षकलाई राज्यले उचित सम्मान दिन नसकेको जिकिर गर्दै पौडेलले शिक्षकले पनि आफूलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पोखरा महानगरले प्रविधिमैत्री शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि सधैं सहयोग गर्ने बताउँदै उनले बजेट कारण राम्रा काम रोकिनुपर्ने अवस्था नआउने भनाइ राखे ।
समाजका केन्द्रीय सचिव देवीप्रसाद शर्माले प्रविधिलाई कक्षा कोठासम्म पुर्‍याउने अभियानका रूपमा संस्था अघि बढेको बताए । उनले संस्थालाई हरेक स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि बताए ।
कार्यक्रममा केन्द्रीय उपाध्यक्ष हिमाकुमारी थापा, सहसचिव श्रीकृष्ण आचार्य, गण्डकी कोषाध्यक्ष सिर्जना खनाललगायतले संस्थाको गतिविधिबारे चर्चा गरेका थिए । समाजको प्रथम अधिवेशन पुस अन्तिम साता काठमाडौंमा हुने सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो ।
आईतबार, मंसिर २९, २०७६, ००:१२:००
शनिबार, भदौ १३, २०७७ सारङ्गी न्युज
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन, कास्कीको राहत विभाग संयोजकमा दीपक पौडेल र इन्चार्जमा विकल पौडेल चयन भएका छन् । इन्चार्ज पौडेल सङ्गठनका पोखरा महानगरपालिका समितिका सचिव तथा प्रदेश राहत विभागका सदस्य हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
बिहिबार, भदौ ४, २०७७ सारङ्गी न्युज
संविधानकाे अर्थशास्त्र ३ घण्टा पहिले
पोखरामा सहिद 'मास्टर साहेव'को श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न १७ घण्टा पहिले